Ndị Rom 11 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Akwụkwọ Ozi E Degaara Ndị Rom 11:1-36
A jụghị Izrel kpamkpam (1-16)
Ihe atụ osisi oliv (17-32)
Amamihe Chineke enweghị atụ (33-36)
11 Ana m ajụzi, sị, Chineke ọ̀ jụrụ ndị ya?+ Mbanụ! N’ihi na mụnwa bụkwa onye Izrel, onye si n’agbụrụ* Ebreham, n’ebo Benjamin. 2 Chineke ajụghị ndị ya, bụ́ ndị mbụ ọ matara.+ Ọ̀ bụ na unu amaghị ihe Akwụkwọ Nsọ kwuru banyere Ịlaịja mgbe ọ na-arịọ Chineke arịrịọ, na-ekpesara ya ihe Izrel mere? 3 Ọ sịrị: “Jehova,* ha egbuola ndị amụma gị. Ha akwatuola ebe ịchụàjà gị, ọ bụkwa naanị m fọrọ. Ugbu a, ha na-achọ otú ha ga-esi gbuo m.”*+ 4 Ma gịnị ka Chineke gwara ya? Ọ sịrị ya: “M ka nwere puku mmadụ asaa (7,000) ndị na-egbutụbereghị Bel ikpere n’ala.”+ 5 Ọ bụkwa otú ahụ ka ọ dị n’oge a. A ka nwere ndị fọrọ,+ ndị a họọrọ n’ihi amara Chineke. 6 Ọ bụrụ na ọ họọrọ ha n’ihi amara ya,+ ọ pụtara na ọ bụghị ọrụ ha mere o ji họrọ ha.+ A sị na ọ bụ ọrụ ha mere o ji họrọ ha, amara agaghịzi abụ amara. 7 Gịnịzi ka anyị ga-ekwu? Izrel enwetaghị ihe ọ nọ na-achọsi ike, ma ndị a họọrọ nwetara ya.+ Ndị ọzọ kpọchiri obi ha,+ 8 otú e dere ya, sị: “Chineke emeela ka ha na-ehi oké ụra.+ O nyekwala ha anya na-anaghị ahụ ụzọ na ntị na-anaghị anụ ihe ruo taa.”+ 9 Devid kwukwara, sị: “Ka tebụl ha bụụrụ ha ọnyà na igbudu na ihe mkpọbi ụkwụ na ụgwọ ọrụ ihe ọjọọ ha mere. 10 Ka anya ha gbaa ọchịchịrị ka ha gharazie ịhụ ụzọ, meekwa ka azụ ha huru ehuru mgbe niile.”+ 11 Ana m ajụzi, sị, Hà zọhiere ụkwụ wee daa nke na ha enweghịzi ike ibili? Mbanụ! Kama ụkwụ ha zọhiere mere ka a zọpụta ndị mba ọzọ, ka e wee mee ka ndị Izrel nwewe anyaụfụ.+ 12 Ọ bụrụ na ụkwụ ha zọhiere mere ka a gọzie ụwa, ọ bụrụkwa na mbelata ha belatara mere ka a gọzie ndị mba ọzọ,+ o doro anya na a ga-enwe ngọzi dị ukwuu mgbe ọnụ ọgụgụ ha ga-ezu ezu. 13 Ugbu a, ọ bụ unu ndị mba ọzọ ka m na-agwa okwu. Ebe m bụ onyeozi nke ndị mba ọzọ,+ ana m akwanyere ozi m ùgwù,+ 14 ka m mara ma è nwere otú m ga-esi mee ka ndị Juu ibe m* nwewe anyaụfụ, ka e wee zọpụta ụfọdụ n’ime ha. 15 N’ihi na ọ bụrụ na nchụpụ a chụpụrụ ha+ mere ka ụwa nwee ohere ka ha na Chineke dịrị ná mma, gịnịzi ga-eme ma a nabata ha? Ọ ga-adị ka è si n’ọnwụ kpọlite ha, ha adịrịzie ndụ. 16 Ọ bụrụkwa na ụfọdụ n’ime ntụ ọka a gwakọtara agwakọta, nke e weere ka mkpụrụ mbụ, dị nsọ, ọ pụtara na ntụ ọka niile ahụ dịkwa nsọ; ọ bụrụkwa na mgbọrọgwụ osisi dị nsọ, alaka ya niile dịkwa nsọ. 17 Ma, ọ bụrụ na a nyakapụrụ alaka ụfọdụ n’ezigbo osisi oliv wee nyado unu na ya n’agbanyeghị na unu bụ oliv ọhịa, unu wee soro na-enweta ọtụtụ ihe ọma dị na mgbọrọgwụ osisi oliv ahụ, 18 unu anyarala alaka ndị a nyakapụrụ anyakapụ isi. Ma ọ bụrụ na unu na-anyara ha isi,*+ chetanụ na ọ bụghị unu ji mgbọrọgwụ, kama ọ bụ mgbọrọgwụ ji unu. 19 Ma, unu ga-asị: “A nyakapụrụ alaka dị iche iche ka e wee nyado anyị.”+ 20 Ọ bụ eziokwu. A nyakapụrụ ha maka na ha enweghị okwukwe.+ Ma, ọ bụ okwukwe unu mere unu ji kwụsie ike.+ Kwụsịnụ ịdị mpako, kama na-atụnụ egwu. 21 N’ihi na ọ bụrụ na Chineke emereghị alaka dị iche iche osisi ahụ wara ebere, ọ gaghị emere unu ebere. 22 N’ihi ya, chebaranụ obiọma Chineke echiche+ nakwa otú o si adọsi mmadụ aka ná ntị ike. Ọ na-adọsi ndị dara ada aka ná ntị ike,+ ma Chineke ga na-enwere unu obiọma ma ọ bụrụhaala na unu anọgide na-eme ihe ọ chọrọ ka ndị ọ na-enwere obiọma na-eme. Ma ọ́ bụghị ya, a ga-egbupụkwa unu. 23 Ọ bụrụkwa na ha amalite inwe okwukwe, a ga-anyado ha n’osisi oliv ahụ,+ n’ihi na Chineke ga-anyadoghachili ha. 24 N’ihi na ọ bụrụ na e si n’osisi oliv ọhịa gbute unu ma nyado unu n’osisi oliv dị n’ubi n’agbanyeghị na a naghị eme ya otú ahụ, o doro anya na e nwere ike ịnyadoghachi alaka ndị osisi oliv ahụ wara. 25 N’ihi na achọrọ m ka unu mara ihe nzuzo a dị nsọ,+ ụmụnna m, ka unu wee ghara ịma ihe n’anya onwe unu. Ihe nzuzo a bụ na ụfọdụ ndị Izrel ghọrọ ndị ihe na-anaghị emetụ n’obi ruo mgbe ọnụ ọgụgụ ndị mba ọzọ zuru. 26 A ga-esikwa otú a zọpụta Izrel niile.+ Otú ahụ ka e dere ya, sị: “Onye nnapụta* ga-esi na Zayọn pụta+ wee mee ka ụmụ Jekọb kwụsị ime ihe ọjọọ ndị ha na-eme. 27 Mụ na ha ga-agbakwa ndụ+ mgbe m ga-agbaghara ha mmehie ha.”+ 28 N’eziokwu, unu ritere uru maka na ha ghọrọ ndị iro Chineke mgbe ha na-anabataghị ozi ọma. Ma n’ihi nkwa Chineke kwere ndị nna nna ha, ọ họọrọ ụfọdụ n’ime ha ka ha bụrụ ndị enyi ya.+ 29 N’ihi na onyinye Chineke na-enye na òkù ọ kpọrọ ndị mmadụ abụghị ihe ọ ga-akwara ụta. 30 N’ihi na otú ahụ unu nupụbuuru Chineke isi,+ ma e meere unu ebere ugbu a+ maka na ha nupụrụ isi,+ 31 otú ahụkwa ka ọ dị ha. O meere unu ebere maka na ha nupụrụ isi. N’ihi ya, o nwekwara ike imere ha ebere ugbu a. 32 N’ihi na ebe mmadụ niile bụ ndị nnupụisi,+ Chineke kwere ka ha niile nupụwa isi, ka o wee meere ha niile ebere.+ 33 N’eziokwu, ngọzi Chineke na amamihe ya enweghị atụ, ihe ọ ma dịkwa ukwuu. E nweghị onye nwere ike ịchọpụtacha ihe ndị o kpebiri, e nweghịkwa onye nwere ike ịmatacha ihe ndị ọ na-eme. 34 N’ihi na e dere, sị: “Ònye ma uche Jehova,* ma ọ bụ, ònye bụ onye ndụmọdụ ya?”+ 35 Ma ọ bụ, “ònye bu ụzọ nye ya ihe nke na ọ ga-akwụghachi onye ahụ ụgwọ ya?”+ 36 N’ihi na ihe niile si n’aka ya, ọ bụkwa ya mere ha ji dịrị, ha niile dịkwa n’ihi ya. Ka otuto dịrị ya ruo mgbe ebighị ebi. Amen.
^ Na Grik, “na-achọ mkpụrụ obi m.”
^ Na Grik, “ka ahụ́ m.”
^ Ma ọ bụ “na-eturu ha ọnụ.”
^ Ma ọ bụ “Onye nzọpụta.”